Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment प्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालमा : स्वास्थ्य के समस्या देखियो? - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, २५ भदौ : प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बुधबार बिहान पौन नौ बजेको समयमा महाराजञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि गएका छन् । सिंगापुरबाट लामो उपचारपछि फर्किएका प्रधानमन्त्री ओली थप स्वास्थ्य जाँचका लागि बुधबार बिहान त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका हुन्।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर स्रोतका अनुसार फलोअपका लागि पुगेका प्रमको स्वास्थ्य जाँच सुरू गरिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका अधिकारीले यसबारे उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा बोल्न इन्कार गरेका छन्। प्रमको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्।
यसअघि प्रमको सिंगापुरमा १० दिनसम्म मिर्गौलाको उपचार गरिएको थियो। उनी यही २० गते स्वदेश फर्किएका थिए। उनको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार भएको थियो। प्रधानमन्त्री मिर्गौला रोगबाट पीडित छन्। उनको १२ वर्ष अघि मिर्गौला प्रत्योरोपण गरिएको थियो। सिंगापुरमा उहाँको सात पटक प्लाज्माफेरेसिस गरिसकिएको छ ।
नेकपाका नेता रिजाललाई समाजवादी पार्टी मै फर्कन किन अनुरोध गरियो ?